30.03.2012 ရက်နေ့ ထုတ် The Sun သတင်းစာပါ သတင်းတစ်ပုဒ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » 30.03.2012 ရက်နေ့ ထုတ် The Sun သတင်းစာပါ သတင်းတစ်ပုဒ်
30.03.2012 ရက်နေ့ ထုတ် The Sun သတင်းစာပါ သတင်းတစ်ပုဒ်
Posted by ကိုငြိမ်းချမ်း on Mar 31, 2012 in Copy/Paste | 13 comments
မနေ့ က မလေးရှားထုတ် The Sun သတင်းစာရဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းတစ်ခုကို ဖတ်လိုက်မိပြီး သက်ပြင်းတွေ အခါခါချမိလို့ရွာသူားတွေကိုလည်း ဖတ်စေချင်တာကြောင့် ရှယ်လိုက်တာပါ.. ကိုယ့်ဖာသာ ဖတ်ပြီး စဉ်းစားကြပေတော့ဗျို့ … IMG
သူကြီးရေ ကူပါဦး.. pdf ဖိုင်တွဲတင်လိုက်တာ စာဖတ်သူတွေကိုအလုပ်ပေးရှုပ်သလိုဖြစ်သွားပြီ..
ပို့ စ်မှာတခါတည်း ပေါ်အောင်လုပ်ပေးပါဦး
ကိုငြိမ်းချမ်းရေ .. pdf ဖိုင်ကို … JPG အနေနဲ့ သိမ်းပြီး … ပုံအနေနဲ့ ပို့စ်ထဲ အင်းဆက်လုပ်လျှင် ပိုမြင်သာမယ်ထင်ပါတယ် … ။
ဟုတ်.. လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်.. ကျေးဇူးပါတုန်တုန်
I cant see anything.What news?
Cautious welcome for Myanmar maids idea
PETALING JAYA: Maid agencies welcomed the possibility of having Myanmars as maids but cautioned that citizens from that country who become domestic workers would need to adapt to the local culture.
“Employers must be patient and understanding as it may take some time before they can adapt to the culture, food, religion and language in Malaysian homes,” said Malaysian National Association of Employment Agencies (Pikap) president Datuk Raja Zulkepley Dahalan.
Association of Foreign Maid Agencies president Jeffrey Foo said employers and agencies might have to deal with cases of “runaway maids”.
“Based on our experience, Myanmar workers haveatendency of running away from their employers,” he said.
“Although Myanmars may be an alternative to Indonesian maids, most employers prefer domestic helpers from Indonesia due to the absence of the language barrier.”
သဂျီး နဲ့ ပို့ စ် ပိုင်ရှင် ကိုငြိမ်းချမ်းတို့ ရေ ၊ ဘိရုမာလိုလေး ရေးပေးပါ ခင်ဗျ ။
အကုန်လုံး ကို နားမလည် ။ သဘောမပေါက်လို့ ပါ ခင်ဗျ ။
ကျုပ်ကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဘိုလိုသိပ်မဖတ်တတ်ဘူး ဆရာရေ ။
မြန်မာအိမ်ဖော်များ ထားရှိလာနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ကြိုဆိုသော်လည်း အိမ်ဖော်အဖြစ်လာရောက်လုပ်ကိုင်မည့် သူများအနေဖြင့် မလေးရှားယဉ်ကျေးမှု့ စရိုက်တို့ ကို လိုက်နာ ရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိပေးလိုက်သည်။
အလုပ်ရှင်များသည် အိမ်ဖော်များ အနေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု့ စရိုက်၊ အစားအသောက်၊ ဘာသာရေးထုံတမ်းစဉ်လာ တို့ နားလည် သည်အထိ စိတ်ရှည် နားလည် အချိန်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း Datuk Raja Zulkepley Dahalan. က ပြောကြားခဲ့သည်.။
Jeffrey Foo ကလည်း အိမ်ရှင်များနှင့် အလုပ်အကိုင် အေးဂျင့်များအနေနှင့် လည်း အိမ်ဖော်များထွက်ပြေးမှု့ ကို ကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်း သတိပေးလိုက်သည်။
၄င်းမှ ဆက်လက်၍ ၄င်းတို့၏ အတွေ့အကြုံ အရ မြန်မာ အိမ်ဖော်များ အိမ်ရှင်များထံမှ ထွက်ပြေးလိုသော အလားအလာများရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ အိမ်ဖော်များ အား အင်ဒိုနီးရှား အိမ်ဖော်များနှင့် အစားထိုး နိင်ဖွယ် ရှိသော်လည်း အိမ်ရှင်အများစုမှာ ဘာသာ စကား အခက်အခဲကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော်များကို သာ ပိုမို လိုလားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ သည်။
တတ်သလောက်မှတ်သလောက်ပြန်ထားတာ ။ မှားရင် သားသားကို မဆူနဲ့နော် ဆရာမကြီး…
အင်ဒိုနီးရှား စကားနဲ့ မလေးရှား စကား က နဲနဲလောက်သာ ကွာ တာ ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆြာထူးရေ ။ အခုမှဘဲ သိရတယ်ဗျို့ 
နဲနဲလေးလွဲနေလို့ ၊ နားလည်လွယ်အောင် ပြင်ရေးပေးမယ်နော် ။
အဘ လည်း ဘိုလို တတ်လှလွန်းလို့ မဟုတ်ပါဘူး ။
( ယခု ဝင်ရောက်လာမည့် ) မြန်မာ အိမ်ဖော်များ အား ( ယခင် ) အင်ဒိုနီးရှား အိမ်ဖော်များ၏ နေရာတွင်
အစားထိုး နိင်ဖွယ် ရှိသော်လည်း အိမ်ရှင်အများစုမှာ
ဘာသာ စကား အခက်အခဲကြောင့်
အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော်များကို သာ ပိုမို လိုလားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ သည် ။
( အင်ဒိုနီးရှား စကားနဲ့ မလေးရှား စကား က အတူတူလောက်ပဲ ရှိတယ် )
( အင်္ဂလိပ် အစိုးရမင်းများ တည်ထွင်ပေးသွားတဲ့ ဘာသာ စကား ဖြစ်ပါတယ် )
မလေးရှား အိမ်ရှင်တွေရဲ့ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်မှု ကြောင့်
အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရက ၊ မလေးရှား ကို အိမ်ဖော် သွားလုပ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်လိုက်ပါပြီ ။
အဲဒီ အိမ်ဖေါ် ကွက်လပ်ကို မြန်မာတွေ နှင့် ဖြည့်စီး ဖို့ ကြံစည်နေတာပါ ။
အင်း ငါ့နှယ်နော် ၊ ရေးရတာတောင် စိတ် မကောင်းလိုက်တာ ။
စကားမစပ်..ကျုပ်တင်တဲ့သတင်းက.. အပေါ်ကကိုရင်ငြိမ်းချမ်းသတင်းနဲ့.. ကျောရိုးပဲတူတာ.. အတူတူတော့မဟုတ်ဖူး..
တိုတို လိုရင်းပြော၇ရင်တော့.. မြန်မာတွေ မလေးရှားမှာအိမ်ဖေါ်လုပ်ရန်အခွင့်ပေးလိုက်ပါသည် ပုံစံနဲ့.. မလေးရှားကလုပ်ချနေတာ…။
Indonesia imposedatemporary freeze on the supply of Indonesian maids to Malaysia on June 26, 2009 following reports of cases of abuse by employers.
The temporary freeze was lifted following the agreement between Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak and Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono atameeting in Bali, November last year.
On May 30, 2011 the two countries signedaprotocol to amenda2006 Memorandum of Understanding on the hiring and placement of Indonesian maids, in relation to provisions on the protection and well-being of maids and employers. – Bernama
အဲဒီအပေါ်ကသတင်းတွေလိုက်ဖတ်ကြည့်တာ.. မလေးရှားနဲ့..အင်ဒိုနီရှား.. အိမ်ဖေါ်ငှားတာမှာ ပြဿနာဖြစ်နေပုံ.. ဖြစ်ထားပုံပေါ်တယ်..။
အဲဒါနဲ့.. မလေးရှားက.. မြန်မာပြည်ဖက်လှည့်တဲ့သဘော(ဒါမှမဟုတ်) အလှည့်ပြတဲ့သဘောရှိတယ်..။
သေသေချာချာနားလည်တဲ့.. အေးဂျင့်တွေနဲ့.. ညှိပြီးဈေးကစားဖို့/ ပညာသုံးဖို့.. သင့်တယ်လို့ထင်မိတယ်..။